Reimer Mapatya - Iyo Horror Bonde Reassignment Nyaya | KUSVIRA
Bruce Reimer nemunun'una wake Brian akaberekerwa muCanada mu1960s. Pazera remwedzi minomwe, vakomana vasina hutano vakadzingiswa. Asi vanachiremba vakashandisa nzira nyowani yekudzingiswa, inosanganisira yemagetsi cauterizing sindano, paBruce. Tsaona yakaitika, ichipisa chose mbichana yemukomana.
Vabereki vake vakasarudza kutora Bruce kuna Dr. John Money, chiremba wepfungwa uye zvepabonde kuJohannes Hopkins vavakanga vaona paTV.
Dr. Mari yaive nefungidziro yekuti kunze kwekubereka uye mabasa ekurapa, gomarara raive renzvimbo yekuvaka. Kusvika iye Reimer mapatya, iye ainyanyo shanda nenyaya dze intersex - vana vanozvarwa vane vaniguous genitalia kana abatwa zvisina kufanira bonde chromosomes.
Asi maReimer mapatya - neimwe nzira hutano uye hwakagadzikana akajairika - aive muyedzo wakakwana wekuyedza dzidziso yake yekubuda pachena kwechikadzi. Brian aizorerwa achiri mukomana, uye Bruce aizoita kubva panguva ino achinzi Brenda, uye arerwa semusikana.
Ma Reimers akabvuma, nekusimbirira pazvipfeko zvevasikana uye kushamwaridzana kwaBrenda muhuduku hwese. Ivo havana kumboudza mapatya nezve tsaona, kana nezvebonde raBrenda rekubereka.
Mapatya aya akaunzwa kuti acherechedzwe gore rimwe nerimwe naDr. Money, uyo akaiti nyaya iyi kubudirira kwakapfuura panguva iyo mapatya aya aive nemakore mapfumbamwe.
"Hapana mumwe munhu anoziva kuti ndiye mwana akaverengerwa nyaya yake mune venhau panguva yengozi," akanyora kudaro.
"Maitiro ake akajairwa nemusikana mudiki anoshanda, uye akasiyana chaizvo nekusiyana nehunhu hwevakomana hwemapatya, zvekuti hazvipe chero chinhu chinoita kuti munhu afunge."
Izvo izvo Chiremba asina kuudza
Kubudirira kwepapepa kwaBrenda Reimer semusikana mudiki anodikamwa uye akanyatsogadziriswa haana kuenderana nehupenyu hwakagara hwemwana. Brenda Reimer aive rambunctious tomboy - anodziviswa nevakomana nezvekupfeka zvipfeko, uye nevasikana nekuda kwekunyanyisa.
“Aipanduka. Aive murume chaiye, uye ini handina kukwanisa kumunyengerera kuti aite chero chinhu chikadzi. Brenda anga asisina shamwari dzaikura. Munhu wese akamuseka, akadana mukadzi wake webako, "Amai vaBrenda, Janet, vanoyeuka mubvunzurudzo. Asi Brenda aive musikana akasurukirwa, akasurukirwa.
Munguva yemapatya anotarisa uye achiona, Dr. Mari aimanikidza mapatya kuti asununguke vasina kupfeka uye kuti vatambe mumutambo wekutamba, vachiita zvinzvimbo zvakasimbisa vakomana vavo. Pane imwe nguva chiitiko ichi, kutamba uku kwakaitwa mifananidzo.
Pazera ravo rekuyaruka, mapatya aya aipikiswa zvakanyanya kuenda kunovhenekwa naDhivha Mari.
Zera 13, Brenda akanga achizviuraya.
Na 15, Reimers akamira kuenda nemapatya kuna Dr. Mari uye akazivisa chokwadi kunaBrenda - aive biological male. Akanyatsobvuma kuzivikanwa kwake kwechirume, akasarudza zita rekuti David, ndokutanga kurapa kwemahara uye kuvhiya nyowani. Iye akadanana uye akaroora mukadzi, waakanga ana vana.
Asi maronda ehuduku hwake hwaishungurudza aive akadzika kuna David nemukoma wake. Ivo vaviri vakatambura nekuora mwoyo. Mushure memakore 14, mukadzi waDavid akamuramba. Ipapo Brian akafa achibva kune zvinodhaka. Nguva pfupi yapfuura, muna May 2004, David akazviuraya. Aive 38 makore.
Pasinei nezvose, Dr. Mari haana kumbobvira aprinda chero zvidzokiso zvewezvidzidzo zvake, kana kuwedzera chero kururamisa. Nekuda kweichi chidzidzo chaDr. Mari chichigara chichiwanikwa sekushandurwa kwevakadzi kwakabudirira nachiremba.